२३ माओवादीले भारतमा आत्मसमर्पण गरेका हुन ? - Everest Dainik - News from Nepal
२३ माओवादीले भारतमा आत्मसमर्पण गरेका हुन ?
नयाँ दिल्ली, वैशाख ३ । भारतको मध्य भागमा पर्ने छत्तिसगढ राज्यमा करीब २३ विद्रोहीहरुले सरकारसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन ।
याे पनि पढ्नुस नेपालबाट जाने वस्तुमा भारतले ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउँदै
ट्याग्स: India, indian maoist